UJill Marie Jones we 'Ash vs Evil Dead' ngokukhaba iAss kaBruce Campbell | - Itv
Eyona Itv UJill Marie Jones we 'Ash vs Evil Dead' ngokukhaba iAss kaBruce Campbell
UJill Marie Jones we 'Ash vs Evil Dead' ngokukhaba iAss kaBruce Campbell
UJill Marie Jones njengoAmanda Fisher kwi I-Ash vs Ebi efileyo . (ifoto: Starz)
Ukubhiyozela inkulumbuso yale mpelaveki yokuchaphazeleka kwegazi, ukusebenzisa i-chainsaw kunye ne-groovy eqinisekileyo I-Ash vs Ebi efileyo , Siza kukhupha udliwanondlebe olutsha yonke imihla kule veki kunye nabalingisi kunye nabadali. Izolo ibikhona UDana DeLorenzo . Namhlanje: UJill Marie Jones.
ULucy ongenamthetho unokuba nomlinganiswa oyimfihlakalo, uRay Santiago angadlala usisi, kwaye UDana DeLorenzo Kusenokufuneka ukuba urhwebe ii-liners kunye noBruce Campbell, kodwa nguJill Marie Jones onomsebenzi onzima I-Ash vs Ebi efileyo - phakathi kwegazi, amathumbu kunye nokuhlanya, UNks. Jones ubonakalisa umcuphi u-Amanda Fisher, indoda ethe ngqo yolu ngcelele.
Engeyiyo ngokuchanekileyo umsebenzi ebengawukhuphi ngaphambili. UNks Jones ukubonakala kokugqibela kweTV kwakukhanya IiFOX's Umngxunya wolala , Olunye uthotho olusisiseko kuzo zonke izinto ezoyikisayo nezingaqhelekanga. Kodwa ukuba isiseko-intambo Umngxunya wolala isikolo esiphakamileyo, i-Starz's I-Ash vs Ebi efileyo isidanga semasters. Njengokuba yena ngokwakhe eyibeka xa sadibana phezulu ehotele INew York EDITION: Ndiziva ngathi ndinediploma egazini ngoku.
Zeziphi ezinye iingenelo eziza nelo wonga? Ithuba lokukhetha ingqondo entle ejijekileyo yomdali uSam Raimi, eyona nkqubo iphicothwa kakhulu emhlabeni, kunye nethuba lokukhaba iesile likaBruce Campbell.
Ndibize ngokuba ' Ukungcola kufile' iinwele. Igazi belinokunamathela entlokweni yakho kakhulu, kuya kufuneka unqumle ezinye iinwele.
Umjongi: Ungandixelela ngenkqubo yokuphosa? Ndiyazi ngeeprojekthi ze-franchise ezifana Ash vs Evil Dead inethiwekhi igcina nkqu nabadlali ebumnyameni.
UJill Marie Jones: Ngokwenene libali elihlekisayo. Iskripthi sasikhuselwe ngenene, ke bendinaye kuphela u-Amanda Fisher amacala xa ndingena funda. Kwiphepha lam lokuqeshwa xa lalisithi umdlalo ohlekisayo ndandicinga ukuba yindyumbasi, kuba kwakungekho nto ihlekisayo kulento yayisenziwa nguAmanda. Kuqala kwakungaqhelekanga, kodwa kwaphela kwaba yeyona nkqubo yam yovavanyo. Bafuna ukuba ndenze yonke into, kwaye oko kungavakala komnye umntu ongenguye umdlali weqonga onje, 'Ewe, nantso into oyenzayo.' phaya, okanye uwele phantsi kwaye ubuye uphakamise abantu abangekhoyo ngexesha lokuphicothwa. Kwakumangalisa kakhulu! Ndikhumbula ndibuza abameli bam, ‘Bakuxelele ukuba yintoni kanye kanye le?’ Yaphela yeyona nto ipholileyo. Ndaziva ngathi ndiyinkwenkwezi enjalo.
Kwaye wakube ufumene ukuba yintoni, ibinjani 'Kulungile, shit. Uxinzelelo olungaphezulu? '
Kuyothusa kancinci ukuhamba into enjenge iconic njengale. Aba balandeli bamangalisayo bebelinde ixesha elide, belinde ifilimu kwaye ngoku kungumboniso. Ndonwabile ngokwenene, ngokunyanisekileyo, ukuba andizange ndiphinde ndibambe indima, ngoko andinayo imingcele emininzi yokudala. Ndifanele ndimfumane, kwaye ndenze, kwaye ndihlolisise. Izihlangu endizinxibileyo azikaze zinxitywe ngomnye umntu. Bandinike inkululeko yokwenza oko. Kwaye uSam Raimi unobukrelekrele, kwaye uyasebenzisana, kwaye ukwenze uzive uyinxalenye yenkqubo. Kwanciphisa kancinci olo loyiko.
Ndichukumisekile, ubuncinci kwiziqendu ezibini zokuqala, indlela uSam nawo wonke umntu abakwazi ngayo ukuzola loo mgca phakathi koloyiko kunye nokuhlekisa. Kodwa uyihamba njani le nto njengomdlali weqonga?
Ndicinga ukuba iza ngokwendalo. Ngokuqinisekileyo ndingumlinganiswa othe ngqo kumdlalo. Kodwa xa ndikunye, yithi, goofiness? Kufana nje neokhestra. Ndidlala esiphi isixhobo kulomdlalo? Kwaye kufuneka wazi apho kufanelekileyo. Awuyi kuba yimigqomo ye-rock band ephezulu kwi-symphony.
Zingakanani iziphumo ezizodwa onokuthi ziyasebenza?
Ewe, ungathetha nabanye abantu kwaye banokuthetha enye into kodwa ndiziva ngathi ndinediploma egazini ngoku. Oomatshini, oomatshini begazi, babegcwele. Ewe kunjalo, ngamanye amaxesha ukuba ujongana nedemon okanye into onokuthi uyenze ku-X. Kodwa kumlinganiswa wam ubuncinci, bekugcwele ngokupheleleyo. Ndayibiza ngokuba yi Ukungcola kufile iinwele. Igazi belinokunamathela entlokweni yakho kakhulu, kuya kufuneka unqumle ezinye iinwele.
Kukho izigcawu kumqhubi wenqwelomoya ngakumbi apho zikubeka khona kwi-ringer, kwaye ayisiyiyo i-CGI. UJill Marie Jones ungene I-Ash vs Ebi efileyo . (ifoto: Starz)
Nangaliphi na ixesha umdlali weqonga anokuba nomnye umdlali ochaseneyo nabo, iyayinyusa imeko. Andikwazi nokucinga ukwenza, yithi, into efana nale I-Avatar apho okuninzi kunesikrini esiluhlaza. Kodwa nam ndisafunda. Ndandifana nomfundi. Kwakumangalisa ukuba ungafunda kuSam, kuba uyinkosi.
Kwakukho into ehlekisayo ndambuza kube kanye. Ndithe ‘Sam, ndifuna nje ukuphila imizuzu engama-45 ngaphakathi kwengqondo yakho.’ U-Becauase andicingi ukuba ndingabamba iyure, kodwa yimizuzu engama-45 kuphela. Kwaye wathi, ‘Awufuni kungena phaya.’ Kodwa unendlela ethambileyo yokuthinta xa esalathisa. Unentlonelo engathethekiyo yabadlali, kodwa abasebenzi. Ufumana isibhamu sakhe, ufumana into ayifunayo, kodwa uyenza ngentlonipho enkulu nemfesane.
Kunjani ukudlala indoda ethe ngqo kuBruce Campbell… uBruce Campbell-ness?
Kumnandi kakhulu, kuba u-Ash ulwamvila ecaleni kwam. Ezo ziqhulo zincinci ezintle azisebenzi kuAmanda. Ucinga nje ukuba liqela lemalarkey. Ndicinga ukuba ndivumelekile ukuba ndiyitsho ngoku, ndiyikhaba iesile ka-Ash njengakabini ngaphambi kokuba ixesha liphele.
'Amagqirha' 2 × 06 Ukuphindaphinda: I-Cock Barrens
Uyilo loTata lwesikhumba uthenga intombi yakhe $ 2.2 M. Ibhokisi yeBowery
Izindlu Ezithengiswayo 2022
Abafazi abathathu abafanelwe iMyuziyam yaseBrooklyn 'yokuQala' ngeMbasa yeNdlela engaphezulu kweNkosazana yeeNgulube
Umbhali weProfayili yaseNew York Mag kungekudala-Yi ebizwa ngokuba ngu- # MeToo 'Hunt Witch'
Iqela iTrump likhuthaza uMda weDonga ngokuGculela u-Jim Acosta we-CNN
I-15 yeVidiyo yeMidlalo eNkulu ethi ayisiyo 'Bioshock'
Iswekile Rautbord, Chicago Socialite, Ithulela umnqwazi abaseTyhini boQinisekiso
Hayi, iTurmeric ayisiyiyo inyango yomhlaza
Ivenkile yaseBarneys 'Upper West Side iyaVala emva kweminyaka elishumi
UChristie uthi uJon Stewart wazikhupha izimvo zakhe kwimeko
UPierce Brosnan Uthenge nje iKhaya elitsha laseSanta Monica
UFrançois Ozon's 'Ngobabalo lukaThixo' yenye yeefilimu ezilungileyo ze2019
Ezona bhanyabhanya zilungileyo zosapho kwi-netflix
Ukusasazwa kwe-movie entsha kwi-netflix
Umkhosi womoya we-polish ka-2010 we-tu-154
ixesha lokwenene lomcuphi 3 iitumato ezibolileyo
Iifilimu ezizayo zeemfazwe emva kwenkqantosi enye
Ukukhutshwa komdlalo weTrone 2019
I-nibiru izokudlula nini emhlabeni